Jowhar.com : Somali Leader News - News: Howl galo lagu soo qab qabtay dhalinyaro iyo mootooyinka oo laga sameeyay Muqdisho
April 24 2014 11:57:43
Howl galo lagu soo qab qabtay dhalinyaro iyo mootooyinka oo laga sameeyay Muqdisho
Ciidamada dowlada ayaa howlgalo ay ka samaynayeen magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxa ay ku soo qabqabteen mootooyin iyo dad u badnaa dhalinyaro.
Taliyaha ciidamada nabadgeliyada waddooyinka Jeneraal Cali Xirsi Bare Cali Gaab oo u waramayay saxaafada ayaa sheegay in ay soo qabteen mootooyin tiradooda kor u dhaafayso boqol iyo konton mooto.
Jeneraal Cali Gaab ayaa sheegay in wixii sharciga wadista mooyinka haysta la siin deyn doono. Magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa ku soo badanayay mootooyinka la kireysto ee loo yaqaan Bajaajka.
Mootooyinkan ayaa waxaa ay isugu jiraan qaar shirkado keensada kana kireeya dhalinyaro maalintii bixisa kiro. Waxana ay isugu jiraan mootooyinka labada lugood leh iyo qaar kale oo saddex lugood leh(Bajaaj),
Afhayeenka ciidamada Madaale ayaa sheegay in mootooyinkan badankood aysan lahayn wax sharci ah isla markaana loogaga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin ururka Alshabaab.
Xasan Nor Ali oo ka mid ah dhalinyaada mootooyinka kaxeeya ayaa shabakada Jowhar.com u sheegay in maalin walba uu ku soo kireysto lacag dhan 16 dollar taasoo uu maalintii iyo habeenkii ku shaqeeyo mootada. Xasan waxa uu intaa ku daray in uu iska bixiyo kirada isla markaana ay ugaga soo harto lacag ku filan noloshiisa.
Hase yeeshee waxaa dhalinyaradan haatan soo food saartay sharciyada ciidamada nabadgelyada wadooyinka maadaama loogaga baahan yahay sharci sax ah oo ay ku kaxeeyaan bajaajka.
Sidoo kale mootooyinka bajaajka ayaa waxa ay ka cawdaan in darawalada takaasida iyo basaska ay u arkaan inay suuqa ka saarayaan isla markaana ay u muujinayaan cadaawad.
Dadka gaar ahaan haweenka ayaa haatan si xoog leh u isticmaala mootooyinka bajaajka loo yaqaan waxaana lagu raacaa lacag ka yar kan takaasida lagu raaci jiray.
master on March 19 2014
0 Comments · 1748 Reads
Jowhar.com744,320 unique visits